Why Unicode? | My Burmese Blog
Why Unicode?	On January 7, 2011	by Htoo Tay Zar	With	28 Comments	- Blogging	ဒီပို့စ်ကတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ယူနီကုတ် ပြောင်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ တချို့တွေကလဲ ပြောင်းမယ် စဉ်းစားတဲ့သူရှိသလို တချို့ကလဲ ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့် စဉ်းစားနေကြတာရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အချိန်ယူပြီးရေးလာခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ရုတ်တရတ် ယူနီကုတ်နဲ့ ထပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
တချို့တွေက ထင်ကြတယ် ဇော်ဂျီရှိနေတာပဲ ဘာဖြစ်လို့ ယူနီကုတ်ပြောင်းမှာလဲပေါ့… အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး တိုင်းရင်းသားတွေ သူတို့ဘာသာတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ စာရေးနိုင်လာပါမယ် နောက်ပြီးတော့ ယူနီကုတ်ဟာ search engine friendly ပိုဖြစ်ပါတယ်။ Google မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့ ရှိရင် ပိုပြီးတိကျတဲ့ အဖြေပေးနိုင်တာရှိပါတယ်။ နောက် အက္ခရာတွေ အလွယ်တကူ စီစဉ်လို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ နောင်တစ်ချိန် OS ထုတ်တဲ့ သူတွေ Mobile Phone ထုတ်တဲ့သူတွေဟာ မြန်မာစာကို မဖြစ်မနေ support လုပ်ရမယ်ဆိုရင် Unicode standard အတိုင်း လိုက်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးသင့်ပါတယ်။ စသဖြင့် အများကြီးပါ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ ယူနီကုတ်ကို အရင်ကတည်းက သုံးချင်ပေမယ့် အဲဒီတုန်းက အဆင်မပြေသေးတာကြောင့် မသုံးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Mac မှာလဲ မရသလို iPhone တွေမှာလဲ အဆင်ပြေအောင် မပြနိုင်ပါဘူး။ အခုပြောင်းဖြစ်တာကတော့ Mac မှာလဲ အဆင်ပြေသလို devices တွေမှာ သုံးလို့ ရလာတာကြောင့်ပါ။ နောက် အထူးသဖြင့် အခြား မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂ်တွေနဲ့ ပြောင်းကုန်ကြတဲ့ အချိန်မှာ အရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော်ပါဝင်လိုက်တာပါ။ အခြားသူတွေ ဘလော့ဂ်တွေမှာလဲ ရေးကြတာတွေ့ပါတယ် တချို့တွေက မပြောင်းကြသေးပဲ စောင့်ကြည့်ချင်ကြသလိုလဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် အထင်ကတော့ စောင့်မကြည့်သင့်တော့ပါဘူး အခုအချိန်ဟာ အသင့်တော်ဆုံး အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။ နောင်တစ်ချိန်ကြရင်လဲ မဖြစ်မနေပြောင်းရတော့မှာပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် OS အများစုက အခုချိန်မှာ Zawgyi နဲ့ Unicode ၂ ခု စက်ထဲမှာတွေ့ရင် Unicode နဲ့သာတက်နေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက ယူနီကုတ်စက်ထဲ ထည့်ရင် ပြသနာဖြစ်တယ် လို့ အများစုကထင်တာ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ဥပမာ Mac OS မှာ ဆို Facebook ကိုဖွင့်ရင် Zawgyi, Unicode ၂ မျိုးထည့်ထားရင် Unicode နဲ့ အလိုလျောက်တက်ပါလိမ့်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ unicode က priority ပိုမြင့်ပြီး FaceBook CSS font ကြော်ငြာထားတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာဖောင့် ၂ မျိုးလုံးထည့်မထားရင် သူက ယူနီကုတ်နဲ့ ပဲ တက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကြရင် ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတာတွေ မမြင်ရတော့ ယူနီကုတ်က ပြသနာရှာတယ် လို့ထင်ရပါတယ်။ ဇော်ဂျီလို့ CSS မှာ ထည့်ထားမှ သာ ယူနီကုတ်နဲ့ မတက်ပဲ ဇော်ဂျီနဲ့ တက်ပါတယ် ဥပမာ ကျွန်တော့် ဆိုဒ်ဆို ယူနီကုတ်ပြောင်းရေးနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဇော်ဂျီ ကြော်ငြာထားဆဲမို့ တချို့ browser တွေမှာ ယူနီကုတ်နဲ့ ရေးထားတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
နောက် ပြသနာ တစ်ခုက အများစု ထင်ကြတာ ယူနီကုတ် ပြောင်းသုံးရင် လက်ကွက် အသစ်ပြန်ကျင့်ရမှာလို့ ထင်ကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး ယူနီကုတ် ကို ဘယ်လို လက်ကွက်နဲ့ မဆို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားကြပါတယ်။ မူရင်း ယူနီကုတ် လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်လို့ရသလို ဇော်ဂျီလက်ကွက် အတိုင်းလုပ်ထားတာလဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီ ဇော်ဂျီလက်ကွက် အတိုင်းလုပ်ထားတဲ့ keyboard သွင်းရေးတာပါ။ ကီးဘုတ်ကို ကြိုက်သလို ပြင်လို့ရပါတယ်။ နောက် ဖောင့်ဒီဇိုင်းကိုလဲ ကြိုက်သလို ပြင်လို့ရပါတယ်။ နောက်ဆို web site တွေ ဘလော့ဂ်တွေမှာ အခုတွေ့နေကြရတဲ့ ဇော်ဂျီ အဝိုင်းတွေတင်မဟုတ်ပဲ ခေါင်းစဉ်မှာ စာလုံးဒီဇိုင်းတစ်မျိုး စာကိုယ်တစ်မျိုး စကားပြောနေရာ တစ်မျိုး လက်ရှိ english web site တွေလိုရေးလို့ရတဲ့ခေတ် ရောက်လာတော့မှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ personal ပြသနာ အများစုက ယူနီကုတ် ဟာ ဇော်ဂျီကို အပုပ်ချတယ် စသဖြင့် ထင်ကြပါတယ်။ ဇော်ဂျီ ဘက်က ရပ်တည်မယ်ဆို ပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ပဲ ဆက်ရေးမယ် စဉ်းစားကြတယ် ဒါက personal တွေ ထည့်တွက်နေတာပါ ယူနီကုတ်မှ မဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာပေါ်က အဖွဲ့ အစည်းတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့သူ ရှိသလို မကောင်းတဲ့ သူလဲ ရှိနေမှာပါပဲ။ အဓိက ကျတာက ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ယူနီကုတ် လုပ်နေတဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့ အပုပ်ချဖို့အတွက် အဲဒီဖက်က ယောင်ဆောင်ပြီး လူမုန်းအောင်လုပ်လဲ ရတာပါပဲ။ ဥပမာ ပြောတာပါ လုပ်တယ်လို့လဲ မကြားမိပါဘူး.. သတိထားနိုင်အောင်ပါ အဓိက ကြည့်သင့်တာ အဲဒီ personal တစ်ဦးတစ်ယောက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး တစ်မြေထဲနေနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ သူတို့တွေရဲ့ စာတွေလဲ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ tablet ပေါ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင် ဘလော့ဂ်ရေးနိုင်အောင် လုပ်ပေးကြရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ရယ်တော့ မသိပါ အများစုက ဇော်ဂျီကနေ မပြောင်းလို သေးပါလို့ ကိုအန်ဒီ ဘလော့ဂ်၊ ရွှန်းမီ၊ မခင်ဦးမေ၊ မသက်ဝေ စတဲ့ စတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ကွန်မန့်တွေ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာရှိသလို၊ နောက်ထပ် သင်ယူရမယ်လို့ ထင်နေတာလဲ ပါကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ ကီးဘုတ်ရိုက်တာလဲ ဇော်ဂျီအတိုင်းရိုက်လို့ ရတဲ့ အပြင် ရရစ် ဆို ကကြီး အတွက် ရရစ် အကြီး (ြ ) ခခွေးအတွက် ရရစ် အသေး (ြ ) စသဖြင့်တောင် မှတ်စရာမလိုပါဘူး ယူနီကုတ်က အလိုလျောက်ပြင်ပေးပါတယ်။ ဇော်ဂျီထက် ရိုက်ရတာ ပိုမြန်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့် တာဝန်ရှိသူတွေ ပြောထားတာ ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဇော်ဂျီဟာ Standard stable မဖြစ်ခင် လိုအပ်ချက်အရလုပ်လိုက်တာပါလို့ ပြောထားပြီးသားပါပဲ။ အခု ယူနီကုတ်ဟာ stable ဖြစ်နေပါပြီ သုံးဖို့လဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာမို့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကို TZA WeSheMe blog မှာ ရေးထားတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခု quote လုပ်ချင်ပါတယ်။ “ဇော်ဂျီ ရှိနေလို့ အွန်လိုင်းပေါ်က မြန်မာတွေ မျက်လုံးပွင့်နေတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ယူနီကုဒ်က ဘုရားဖြစ်ပြီး ဇော်ဂျီက ငြမ်းဖြစ်နေတာကိုတော့ လက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။” နောက် မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာပဲ First-11 မီဒီယာ ဆိုဒ်တွေဟာ Unicode နဲ့ ပြောင်းလဲ ပါတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ရောက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ ယူနီကုတ် developer မဟုတ်သလို အဲဒီအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပက်သတ်မှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် စိတ်ကူးတာက အချိန်ရောက်လာတဲ့ အခါ…..
မြန်မာ ဆိုဒ်တွေ၊ ဘလော့ဂ်တွေဟာ အရင်လို့ ဖောင့်တစ်မျိုးထဲ ခေါင်းစဉ်စာကိုယ် မဟုတ်တော့ပဲ ခေါင်းစဉ် စာလုံး ဒီဇိုင်းတစ်မျိုး စသဖြင့်ပြောင်းနိုင်မယ်… ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် OS မှာ မြန်မာစာပါနေပြီးသားဖြစ်မယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ သူတို့ တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေနဲ့ မြန်မာစာတွေ ကို ဖောင့်သွင်းစရာမလိုပဲ ဖတ်လို့ရမယ်၊ က ကနေ အ အထိကို excel ထဲမှာ အလိုလျောက် နာမည် စာရင်းတွေစီပေးမယ့် နေ့တွေကို မျော်လင့်တယ်။ အများစုကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို နည်းပညာ သမားမဟုတ်သူတွေပါ နားလည်နိုင်မယ့် စာနဲ့ ရေးထားမယ်၊ download, FAQ တွေ စုစည်းထားမယ့် ဆိုဒ်တစ်ခုကိုလည်း အခုစလုပ်နေပါပြီ။ Myanmar Sar dot info ဆိုပြီးတော့ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ စတက်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အားလုံးကို တတ်နိုင်သလောက် အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းပြီး ကူညီကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ဖြစ်လာရင်လဲ အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ ဘလော့ဂ်မှာ ပြောင်းရေးချင်တဲ့ သူတွေကို ကူညီချင်ပါတယ်။ အခုကတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ ပြန်ရေးထားပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခြား စာဖတ်သူတွေကော ဘလော့ဂ်ရေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကော စဉ်းစားနိုင်အောင်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အားလုံးအတွက် စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ အမြင်တွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် အခု comment မှာ ရေးခဲ့စေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာရှိရင် ကူညီချင်ပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGooglePinterestPocketEmail	Blogging, Unicode	28 Comments	Soe Mya Nandar Thet Lwin
ဇော်ဂျီဆိုတာကို ရိုက်တတ်အောင် မနဲ ကျင့်ယူခဲ့ရတာ။ အခုချိန်အထိ ကျင့်နေရတုန်းဆို ပိုမပြောဘူး။ ယူနီကုတ်ကို ဘယ်လို လက်ကွက်နဲ့ မဆို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားကြပါတယ် သိရတာတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဘလောဂ့် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ မြန်မာလို ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရအောင်တောင် မနဲ လေ့လာပြီး ကြိုးစားထားရတာ အခုလို ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းပစ်ဖို့ဆို ဘာအကြံဥာဏ်မှ မရှိဘူး။ Fish out of water (Out of the blue) လိုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ နည်းပညာ ကြွယ်ဝနားလည်နေသူတွေက လူဇော်လူမော်လို ယူနီကုတ်တယ်ကွ၊ လုပ်နိုင်တယ်ကွ ဆိုပြီး ရုတ်တရက် ချက်ခြင်းဆိုသလို ထပြောင်းသွားကြတာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပဲ။ တကယ်တော့ ကိုယ်မတတ်တော့ အားငယ်တာလဲပါတယ်။ ဘလောဂ့်မှာ စာတွေ ဇော်ဂျီလို ပုံမှာန်ပေါ်အောင်ရယ်၊ ယူနီကုတ်ကို ဇော်ဂျီလက်ကွက် အတိုင်း လုပ်ထားတဲ့ keyboard ဘယ်လို သွင်းရေးရတယ် စတာတွေကို လူပြိန်းနားလည်လွယ်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဥပမာပေးပြီး ဝေမျှသင်ပြပေးရင်တော့ ကောင်းမယ် ထင်တာပဲ။ အခုတော့ တကယ့် ရေနဲငါးလို ခံစားနေရလို့ ၂၀၁၁ ကစလို့ ဘလော့ဂ်ရေး၊ ဘလောဂ့်ဖတ်တာ နားလိုက်ရင် အကောင်းဆုံးလို့ တွေးနေမိတော့တာ အမှန်ပဲ။ အားကိုးပါတယ် ထူးတေဇာ။ ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။ နန္ဒာ
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကျွန်တော်သာ unicode အခုအချိန်ကတည်းက မပြောင်းထားဘူးဆိုရင် နောင်တချိန် ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ အချိန်မှ ကျွန်တော် စရေးနေရင် ခရီးပေါက်မှာ မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ စောစော ကတည်းကပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြောင်းတဲ့ script ကို ကိုရာဗီ ရေးပေးထားတယ်ထင်တယ်။ WordPress ကို လွယ်လွယ်ပြောင်းနိုင်အောင် တော့ ကျွန်တော် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားရင်တော့ plugin တစ်ခုရေးဖို့ ကြိုးစားကြည့်အုံးမယ်။ အကုန်လုံးကို unicode ပြောင်းအောင်ပေါ့။ wp မှာ plugin လေး ထည့်ပြီး run လိုက်တာနဲ့ unicode ပြောင်းသွားအောင်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ပြောင်းတဲ့ လူတွေအတွက် အခက်အခဲ မရှိတော့ဘူး။ ရေးဖို့တော့ စဉ်းစားနေတယ်။
အခုလက်ရှိ MMUnicode Embed ဆိုပြီး wordpress plugin ရေးထားတယ်။ လာဖတ်တဲ့သူတွေ ဖတ်ရအောင် အဆင်ပြေအောင် font embed လုပ်ထားပေးတယ်။ rendering ကတော့ chrome browser က font embed ကို render မလုပ်ပေးသေးဘူး။ mac မှာလည်း အဆင်မပြေသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် လူသုံးများတဲ့ win မှာတော့ ဖတ်လို့ရတဲ့ အဓိက တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
မှာတော့ ရေးထားတယ်။ Keyboard တွေ font တွေကိုတော့ myanmarlanguage.org မှာ အသေးစိတ် ရှိပါတယ်။
(တကယ်လို့များ နောင်တစ်ချိန် OS ထုတ်တဲ့ သူတွေ Mobile Phone ထုတ်တဲ့သူတွေဟာ မြန်မာစာကို မဖြစ်မနေ support လုပ်ရမယ်ဆိုရင် Unicode standard အတိုင်း လိုက်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးသင့်ပါတယ်။)
အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်တာကို တွေးမိတယ်။
အကုန်လုံး တညီတညာတည်း သုံးဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ (OS ထုတ်တဲ့သူတွေ) ဘက်က support လုပ်ပေးဖို့ ပို မြန်လာမှာမျိုးရော မျှော်လင့်လို့ ရသလား ဆိုတာပါ။
Good article! I also try to write easy guide for enduser such as ‘How to install unicode’, ‘How to install unicode keyboard’, ‘Usage of keyboard’ and something like that. I hope if we do together, we can end up complicated fonts and we can keep abreast of neighborhood countries’ technology.
@ Sister Soe My Nandar Thet Lwin ~ အမ ရေ သိပ်တော့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ဗျာ ဘလော့ဂ်လဲ ဆက်ရေးပါ။ ဒီလို ဘာမဟုတ်တဲ့ အခက်အခဲကြောင့်တော့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ မပြောင်းပဲလဲ ရေးလို့ရသလို ပြောင်းချင်ရင်လဲ ပြောပါ ကျွန်တော် ကူညီပါ့မယ်။ ကျွန်တော်လဲ ရုတ်တရတ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် နဂိုထဲက ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ နောက် ပြီး အခုမှသာ ဘာကြောင့် ပြောင်းရသလဲရေးဖြစ်လို့ပါ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။ 😀
@ ko9~ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေ စပြီးစမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ အားလုံး အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်တို့ နည်းတွေ ကော အကုန်ရေးထားမယ့် http://www.myanmarsar.info ဆိုတာ လုပ်နေပါတယ် မကြာခင်တက်မှာပါ။ လေ့လာစမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး။ ကျေးဇူးပါ။
Macbook Pro မှာ ဒေါင်းဖို့ လင့်လေးကို ညွှန်ပေးလို့ရမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
@ AMMK ~ မျှော်လင့်လို့ ရပါတယ်ဗျာ။ အံ့သြစရာ facts တစ်ခုပြောပါမယ် ကမ္ဘာအနှံ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပတ် အရေအတွက်တောင် ၁ သိန်းနီးပါးလောက် ရောင်းအားရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ နောက်ဗျာ laptop လိုမျိုးတွေ ဝယ်လိုအားတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီအရေအတွက်က Laos, Cambodia, Indonesia တွေနဲ့ တန်းတူ မဟုတ်တောင် မနိမ့်တဲ့ အရေအတွက်ပါ။ အခု iOS 4.0 မှာ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုလို စာတွေ နဂိုထဲက စပါလာနေပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လို မြန်မာစာက လူညီရင် အလှမ်းမဝေးပါဘူး နီးနီးလေးပါ။ ပြောင်းချင်တဲ့ စိတ်ပဲလိုတာပါ လူညီရင် အားလုံးတပြေးညီ ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
@ Apprenticeship ~ ဒီမှာ links တွေရှိပါတယ် အဲဒီမှာ သွင်းလက်ရင် လက်ရှိ Mac မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ထည့်ထားသလိုပါပဲ Menu bar မှာ KeyMagic ဆိုတာထည့်ပြီးရင် လက်ကွက်စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး ရေးလို့ရပါပြီ ခင်ဗျာ။ အသေးစိတ်လဲ ရေးပါဦးမယ်။
You can try package by Saturngod for Linux, Mac
HTZ ပြောသလို အဲဒါမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ တာဝန်နဲ့ ဝတ္တရားအရ ပြောင်းသင့်တယ် ထင်မိပါတယ်။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ မဘုတ်ပလိုကလဲ စနိုးလီယိုပတ်ကို တင်မရဆိုတော့ နောက်ထပ် စက်အသစ်ဝယ်နိုင်မှပဲ ယူနီကုတ်နဲ့ နီးရမယ်ထင်ပါရဲ့
အဲလို ပြေပြေလည်လည် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ ရှင်းပြပါမှ. လိုက်နာချင်စိတ်ရှိတော့မပေါ့
အင်း.. အားရင်တော့ ပြောင်းကြည့်ပါဦးမယ်..
ခုတော့ ဖတ်ရတာရ မရတာမရနဲ့..
@ Bro ကိုကိုကျောက် ~ ဖတ်တဲ့သူ ဖက်က အရင်စဉ်းစားပါတယ် အကို.. ဒါကြောင့်လဲ ပြောင်းလိုက်ဖို့ဆို လွယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ ယူနီကုတ်ပြောင်းလိုက်လို့ စာဖတ်သူ တိုးမသွားပဲ လျော့သွားမှာ ဆိုတာ ကြိုသိပါတယ်။ အနည်းနဲ့ အများ ဒါမှ မဟုတ် အကုန်လုံး မဖတ်တော့မှာ တောင်ပူရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကိုရာ အကျိုးကျေးဇူးက စာဖတ်သူတွေအတွက်လဲ အများကြီး ရှိတာမို့ အရဲစွန့် ပြီး စွန့်စားတယ်လို့ ပြောရတော့မယ် ထင်တယ်။
Risking My Own Blog With Unicode « My Burmese Blog
[…] Why Unicode ပို့စ် တင်ပြီးတော့ နောက်ထပ် […]
Good job Bro! Cheers!
ကျနော့်ကို ကုတ်လိုက်တော့ အယားပြေသွားတာပေါ့ဗျာ… ဟဲဟဲ..
ကျနော်လည်း ပြောင်းချင်စိတ်ရှိနေတာကြာပြီ၊ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူတွေ ပျောက်သွားမှာစိုးပြီး အချိန်ဆွဲနေတာ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းပစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်၊ ဒီနှစ်လို့ပြောတာကလည်း နှစ်ကုန်လောက်ထိ ဆွဲရင် ဆွဲထားအုံးမှာမို့ပါ၊ ပြောင်းချင်စိတ်သာရှိတာ၊ နည်းပညာပိုင်း ဘာမှကို မလေ့လာရသေးဘူး။
ကျနော် မတ်လလောက် ရန်ကုန်ပြန်ကောင်းပြန်မယ်၊ အဲဒီကျရင် တွေ့ရကြအောင်ဗျာ။
Why i can see yours this post from my iphone without install zawgyi or unicode but some of your post can not see well why?
@ Bro Mhawsayar ~ Thanksalot bro
@ Winkabar ~ Thanksalot sister, long time no see.
@ Bro TZA ~ ဟုတ်ကဲ့ အကိုရေ ပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ဖြစ်ရင် လက်တို့ပါဦး ကျွန်တော် လာခဲ့မယ်။ 😀
ထူးတေဇာရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမက ဇော်ဂျီတောင် အလွတ် ရိုက်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm နဲ့ ရိုက်နေတာ။ နည်းပညာနဲ့ ဝေးလိုက်တာမှ…။ ရေးချင်လွန်းလို့သာ ရေးနေတာ ဘာမှ မပြောင်းရဲ မလှုပ်ရဲဘူး၊ မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ တယောက်ယောက် အကူအညီနဲ့ ပြောင်းရမှာပေါ့။ အဲဒီအတွက် ရှေ့ကနေ လမ်းကြမ်းဖောက် လျှောက်နှင့်ကြသူတွေကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အမတို့လို မတတ်တဲ့သူတွေကို လက်တွဲခေါ်ကြပါနော်…:)
ယူနီကုတ်ကိုဘယ်ကနေ ရနိုင်မလဲဗျာ install လုပ်ဖို့ပေါ့
လောလော ဆယ် တော့ unicode to zawgyi ဆိုတဲက bookmark နဲ့ပဲ ပြောင်းဖတ်နေရတယ်ဗျာ
San Thu Aung (ဦးအောင်သူ)
မိတ်ဆွေ လူကြီး ၊ လူလတ် ၊ လူငယ် များသို့ 
ကျနော်က ကွန်ပျူတာ ကို ဘာသင်တန်းမှ စနစ်တကျ မသင့်ရခဲ့ဘူးပါ၊ Academic Level
ဘာမှ မတတ်ပါ၊ အသက်က ၇၀ ဆိုတော့ (လူအိုရုံသွားနေရာမဲ့) အသက်ပါ၊ ယူနီကုဒ်ဖွန့်စသုံးနိင်တာက ၂၀၀၈ ကပါ၊ ပထမ ဇော်ဂျီဖွန့် စသုံးပါတယ်၊ ကျနော်ဝါသနာပါ လေ့လာ လိုက်စား တဲ့ Genealogy (Family Tree) ကို Descendant Pyramid Multiple (Blood)Line စနစ်ဖြင့် မှတ်သားထားတာ စာမျာက်နှာ ၃၅၀၀ လောက်ရှိပါတယ်၊ ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးမှတ်တမ်း တွေ တွင်မက နွယ်နေတဲ့မျိုးဆက်တွေ မြန်မာပြည်က လူသိထင်ရှားသိ သူများရဲ့ ဆွေမျိုးမှတ်တမ်းတွေကို ဇော်ဂျီဖွန့်သုံးတာပါ၊ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဇော်ဂျီကမှတ်တမ်းတွေ မှာ ကိုယ့်ရိုးကားယား ဖြစ်လာတယ် ၊ ၂၀၁၀ မှာ ထွက်လာတဲ့ Unicode Standard 5.2 ရတယ်လို့ဖေါ်ပြထားတဲ့ ဖွန့် တွေထဲမှာ Ayar Unicode ဖွန့် ကို ပြောင်းသုံးပါတယ်၊ ပိုအဆင်ပြေတာတွေ့ ရပါတယ်၊
ဇော်ဂျီက ယူနီကုဒ်မှာ မူလ ကျေးဇူးရှင်ပါ၊ ဇော်ဂျီကငြမ်းပါဘဲ၊ Standard Unicode Guide Line အတိုင်း လိုက်နာတဲ့ ဘယ်ယူနီကုဒ် မဆို ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်၊ြီပီးပြည်စုံတဲ့ မြန်မာဖွန့် များ မကြာမီထွက်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ပညာရှင်များကို လေးစားစွာဂုဏ်ပြုလျက်ပါ၊ Ayar ဖွန့်က ယခု Unicode Standard 6.0 ထွက်လာတော့ စမ်းသုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေတာတွေ့ ရလို့သတင်းကောင်းပေးတာပါ
ကျနော်က ဘယ်ဖွန့် ကိုမှ်Bias မဖြစ်ပါ၊ Standard Unicode Guide Line ကိုလိုက်နာတဲ့ ဘယ်ဖန့် မဆို ကြိုဆိုလျှက်ပါ
Lion ~ First Well Known OS Comes with Myanmar Unicode « My Burmese Blog
[…] Why Unicode? […]
Super 8 will come out with Myanmar Unicode!! Umm « My Burmese Blog
please how i type ၍ in apple